If You Are An Arakanese, Be An Arakanese. You Will Never Surrender.
If You Are An Arakanese, Be An Arakanese. Never Surrender. Never Give Up. ရခိုင်ဆိုကေ ရခိုင်ပိုင် ပြုမှု ပြောဆိုနီထိုင်ပါ။ ရခိုင်သည် ရခိုင်ဖြစ်သည်။ ဂစ္စပနဒီ မြစ်သည် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်သို့စီးဝင်သည်။ ဧရာဝတီမြစ်သည် ကပ္ပလီပင်လယ်ထဲသို့စီးဝင်သည်။
THERE IS NO SO-CALLED ROHINGYA IN ARAKAN.
The Arakan (1)
Watch Out So- called Rohingya (2)
လူစွာတိ ဖတ်ကြည့်လီ (2)
ပေါက်ကွဲမှု ရခိုင်ကဗျာ (4)
ရခိုင်သားတိ ဒေမှာကား ( ARAKAN SOCIAL SITE )
The Kingdom of Arakan or The dark side of the VOC mentality
he VOC mentality
PhD defence: Thursday 13 March, 16.15 hrs
(http://www.leidenuniv.nl/en/researcharchive/index.php3-c=456.htm)The dark side of the VOC mentality
Posted by မင်းဆက်ရခိုင် at 04:24 ,0comments
Labels: လူစွာတိ ဖတ်ကြည့်လီ
An Historian Looks at so- called Rohingya
Posted by မင်းဆက်ရခိုင် at 15:09 ,0comments
Labels: Watch Out So- called Rohingya
Posted by မင်းဆက်ရခိုင် at 01:19 ,0comments
Labels: ပေါက်ကွဲမှု ရခိုင်ကဗျာ
THE CORONATION OF KING DATHA-RAJA (1153-1165 A.D)
SAN SHWE BU J.B.R.S Vol. Part 2. 1917
In India Buddhism flourished in its purest form till the close of the first century A.D. during which time it had no rival faith worthy the name. That the Jains of those days formed an insignificant minority will be clearly evidenced by the fact that more than three fourths of the people named, specified objects of donation, inscriptions throughout India from Asoka to Kanishka's time are Buddhist, while the majority of the remainder are Jain. From that time onwards the Brahmans, with their numerous gods and manifold sacrifices, became increasingly powerful till, in the first half of the eighth centuryafurious persecution instigated by the great Brahman apostle, Kumarila Bhata, succeeded in eliminating Buddhism from the land of its birth. It cannot, therefore, be supposed that suchamighty upheaval did not in some way influence the religious thoughts and ideas of Arakan, which is India's next door neighbour.
In fact all available records clearly indicate that just about this time oralittle while after it, Brahman gods and their sacrificial forms came into Arakan and along with Buddhism ___ the original religion ___ they found equal favour with the people. It so profoundly affected the Arakanese of those days thatawhole dynasty of their kings adopted Hindu names. The coins they struck bore on one side the effigy of the sacred bull, Nandi, the riding animal of the god Siva.
Temples were erected in quick succession in the approved Indian style and were specially dedicated to the worship of Siva and Vishnu. The decorations, which were used in these religious structures, consisted of figures illustrating the lesser gods of the Hindu Pantheon.
When Datha-Raja ascended the throne of Arakan in the 12th century, Buddhism and Brahmanism shared equal honours and the cults of Siva and Vishnu were in high favour. Indeed, so deeply rooted were the latter faiths in his country that they affected all the ceremonials, even ofapurely domestic nature. They permeated every household and influenced the individual and domestic concerns of everyday life. They interfered with marriage, which before that time, was purelyacivil contract; they requiredaperson to perform certain sacrifices before undertakingajourney; they imposed obligation on cultivators and fishermen and, inathousand different other ways, which constituted the daily life of the people.
Nowhere in the history of Arakan is this fact so prominently brought out than in the coronation of King Datha-Raja on the full moon day of Kason 1158 A.D., which the old chroniclers have handed down to us with all the accuracy and vividness of the Dutch School. The following isasummary of what I have been able to gather from various sources, which, I trust, will enable the general reader to fromajust estimate of the powerful influence of Brahmanism in Arakan from the end of the 8th to the middle of the 14th century A.D.
By the advice of the astrologers and the other Brahmans, whose specially duty was to conduct religious ceremonies, active preparations were made for the coronation of the King. From the seven different hills in the various parts of the kingdom earth was collected. A particular kind of wood was cut atacertain hour of certain day ofacertain week for the erection of the pandals. On the most auspicious day of that year, i.e. the full moon day of Kason, three kinds of pandals were erected, having for their roofingaparticular kind of leaves brought by the Shans of the north-east. The place selected was the right bank of the Lemro river,aparallel stream to the east of the Kaladan. The first pandal had the general appearance ofalion and was called Thi-Har-Tha-Na (oD[moe). The second resembled an elephant and was called Ga-Zar-Tha-Na (*Zmoe). The third resembledapeacock and was called Mor-Rar-Tha-Na (arm&moe). The first was decorated all in white, the second in red, and the third in blue. In the first Brahmans, in the second sailors, and the third cultivators, waited in attendance. Then the ground covered by each of the pandals was laid over withalayer of the earth brought from the seven different hills. In the first pandal,amillionaire's son clothed in yellow robes had to till the ground by means ofagold ploughshare drawn by white bulls. In the second, the son of one who belonged to the middle class and clad in red robes had to do the same by means ofasilver ploughshare. The son of an agriculturist in green robes had to do likewise in the third by means of an iron ploughshare. After this, the earth was well mixed with cow's milk and dung and then grains of paddy, millet, sessamum and so forth were strewn over. The whole place was then fenced off so as to prevent the intrusion of those who were not directly concerned with the ceremonies.
When these preliminaries had been gone through, the Brahmans conveyed the images of Sarasvati, Parvati and Visnu on chariots decked out for the occasion, and placed them in the pandals amidst the chants of mantras and other incantations. Twelve other Brahmans and four Bhikkhus intoned special hymns usually employed at the ordination of Buddhist monks. At the same time, another class of Brahmans repeated appropriate slokas from the vedic texts. This ended, there wasasimultaneous blowing of conches during which the structures were sprinkled with holy water.
The sacred water of the Ganges was then brought in jars of gold, and, at the most favourable conjunction of the planets, the water of the Kaladan and the Lemro rivers was conveyed by forty virgins belonging to the five highest classes of the people. Eight were princesses with gold jars; eight were daughters of Brahmans with earthen-ware jars; eight were daughters of ministers with copper jars; eight were daughters of millionaires with silver jars; and eight were daughters of middle class people with iron jars. Each class went in separate boats and were accompanied by Brahmans, ministers and representative agriculturists. Then in the midst of strains of joyous music, the boats pulled towards midstream, where the jars were filled and then the parties returned to the shore. The water conveyed by the princesses and the daughters of Brahmans was placed in the lion pandal, that brought by the daughters of ministers in the elephant pandal and the remainder in the peacock pandal. The whole route from the Royal Palace to the pandals was sprinkled with holy water and flowers by Brahmans, who chanted hymns at the same time. It was also completely roofed over all the way so as to shut out sunlight, and, on both sides, sugar cane and plantain trees were alternately planted.
At the conclusion of all these elaborate preparations, the King and Queen clad in splendid robes, glittering with the nine kinds of gems that ornamented them, proceeded onawhite elephant towards the pandals, escorted by armed soldiers, Brahmans and ministers, who went both before and behind them. On arrival, they entered the lion pandal. Here, the King separating himself from the queen uttered certain formulas while humbly seated on the floor. He then bathed himself in the elephant pandal, and, in the other, he washed his head. Having performed this acts, the eight princesses clad in beautiful raiment stood before the King, and administered the first coronation oath: “Oh King, in all your conduct, be you guided by the wisdom and experience of all the wise monarchs who ruled the earth before you. Oh King, it is our fervent hope that you will not be the first to give offence to other neighbouring kings; that you will always encourage and support all the industrial and commercial enterprises of your subjects; that you will always treat your people as if they were your own children; that you will guard and protect their properties and possessions and that you will always regard their lives as dear as your own. Oh King, we wish you to discard every form of anger, malice and hatred, and to do and say only that which is right and appropriate.” Saying this, with one accord and with uplifted hands, they poured from silvery white conches studded with gems the sacred Ganges water over his head.
Eight high-class Brahmans then stepped forward and administered the second oath: “Oh King, be the defender of your faith. Strive always to make it popular and universal. Love and defend all living beings as you would own self. Protect the properties of your subjects as you would your own. In all political relations with other countries, do not be the aggressor. We implore you to discharge your kingly duties always, to listen to the advice of wise counselors and to preserve the honour of your race”. They then went through the same ceremony of pouring Ganges water over his head.
Eight men belonging to the middle class then stepped forward and administered the third oath: “Oh King, we trust you will introduce just and benign laws for the prosperity and progress of your subjects. We implore you to avoid all forms of evil and to shun the companionship of those who have no honour nor self-respect.”
At the conclusion of this ceremony, the representatives of all the different classes of people took their stand before the King, and administered the fourth and final oath: “Oh King, by virtue of the ( water pouring) ceremony, which we have just performed, we hope you will be able to carry out all our wishes in every particular. Rule us wisely and well, and never levy taxes more than the legitimate one-tenth of our incomes. Oh King, if you fulfill all our wishes and act and say all that we implore you to do, your majesty, might and power, both in the present and the future, will steadily increase, like the rising sun and the waxing moon. All the other kings will bow down before you, and own your allegiance, and all the territories over which you bear rule will be from robbers and evil-doers. There will be profound peace, prosperity and plenty, and, above all, you will enjoyalong and happy life. But if, on the other hand, you set our wishes at naught, and give rein only to your own wicked and selfish desire, without any regard for the happiness and welfare of your subjects, may there be not onlyaspeedy disintegration of your Kingdom by the prevalence of frequent storms, earth-quakes, fires and other destructive forces of nature, by the depredation of thieves, robbers and all other agents of lawlessness, but may you yourself also haveashort and miserable life, and, in the end, may you suffer unto eternity all the indescribable horrors of the nethermost hell.”
The King then, having madeasolemn vow that he would conduct himself in suchaway as to give satisfaction to every one of his subjects, returned with his Queen to the Royal Palace in the same imposing order as when he started from it. This concluded the whole ceremony, and the three pandals were dismantled and cast into the Lemro river in order to prevent the commission of sacrilege on them.
Posted by မင်းဆက်ရခိုင် at 07:02 ,0comments
Labels: The Arakan
Anupong, Prawit under fire for 'failing in South'
Posted by မင်းဆက်ရခိုင် at 16:40 ,0comments
မြန်မာကျူးကျော်စစ်ကို (၄၅)ရက်ကြာ ခုခံတိုက်ခိုက်ပြီးနောက် ၁၇၈၄-ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာလ ၃၁-ရက်နိန့်မှာ ရခိုင်ပြည်ကြီးနန့်တကွ ရုပ်ရှင်တော် မဟာမြတ်မုနိ အသိမ်းခံလိုက်ရသည်၊ မြန်မာများသည် ရခိုင် ရွီနန်းတော်၊ ပိဋကတ်တိုက်တော်။ ဘုန်ကြီးကျောင်းအကြီး (၃၀) အငယ် (၃၀ဝ၀)ကျော်ကို မီးလျှို့ဖျက်ဆီးခသည်၊ ရခိုင်တပြည်လုံး ဖူးဖူးရောင်သော လူသီကောင်များဖြင့် ပြန့်ကြဲလျက်ဟိသည်၊ နှစ်ပေါင်း (၅၀ဝ၀)ကျော် ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်းနန့် နီထိုင်လာခသော ရခိုင်နိုင်ငံတော့် တိုင်းသားပြည်သူများမှာ ကူမည့်သူမဟိ ဖီးလွတ်ရာ
ကို ထွက်ပြီးကတ်ရသည်၊ မြန်မာများသည် ပုခက်တွင်းသား အချေသူငယ်ရို့ကိုပါမချန် သတ်ဖြတ်သည်၊ ရခိုင်မှတ်တမ်း
“အချေသငယ်အစိတ်ကေရို့။ ပြုံရယ်ရွင်ဘိ။ မိမသိကို။ မွီးမိထံမှ ယူပြီးမှလျင်။ ကျလာမလွဲ။ နှစ်စိပ်ကွဲလို့ ရဲရဲသွီးးစက် အထွက်၏။ တချက်မြီနှစ်လှန်ကိုစိုက်ကာ ခံလိုက် တုံလျှင် ရင်ကဝင်၏ဟု တွိရပါသည်၊ အသတ်ခံရသော ရခိုင်သားရို့ကို “တင်းးဝပန်းးခိုငိုငိုင် တမြိုင်မြိုင်ရခိုင်လူအလောင်းး” ဟု မှတ်တမ်းတင်ထားခသည်၊
ဂဏန်းသင်္ချာအလို (၇)သန်းကျော်သည်၊ မြန်မာတိ သတ်ဖြတ်ခသည်ကို အစွဲပြုလို့ဂေါင်းပုံပြင် (မြောက်ဦး)။ လူသတ်ဂျိုင်(မြောက်ဦး)။ ရီတက်ရီကျသောအခါ သောင်ပြင်တွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ချိုင်နှောင်ပနာ သတ်ခသောကြောင့်ရီအကျတွင် ဖြူနီသော အလောင်းကောင်တိကို မြင်ရသောကြောင့် ပြင်ဖြူမော် (မြောက်ဦး)။ အချေသူငယ်ရို့ကို အရှင်လတ်လတ် ပေါင်ကိုဖဲ့ပနာ သတ်ခသောကြောင့် ပေါင်ဖဲ့ရွာ(မာန်အောင်) လက်ကိုဖြတ်ပနာ တောင်နှယ်ပုံထားသောကြောင့် လက်ပုံတောင်(မာန်အောင်)။ ရီကန်တွင် လူအပြည့်သတ်ပနာ ပုံထားသောကြောင့် သီဘေးကန်(ပေါက်တော)။ လက်ပံပြား
လူသတ်ကန်(ပေါက်တော)။ သွီးချောင်း(တောင်ကုတ်)။ လူအသားတိကိုခွတ်ဖြတ်ပနာ ပုံထားသောကြောင့် အသားပုံရွာ (ပုဏ္ဍျွာာန်း) စသည်စသည်ဖြင့် နာမတွင်သည်၊
နှစ်ပေါင်း(၄၀)လုံးလုံး ရခိုင်အမျိုးတုံးလားအောင် သတ်ဖြတ်ခသည်၊ မာန်အောင်မြို့တမြို့တည်းတွင် အသတ်ခံရသည်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်မှာ “လူငယ်တသောင်း။ လူကြီးးပေါင်းမူ။သျှစ်သောင်းးအစွန်းး။ တသိန်းးမှန်း၏။ မယွန်းးထိုခါ။ သီကုန်ပါ၏။သိမ်းကာယူက။ ပြည်အင်းဝသို့။ ပါရလီငြား။ လူယောင်္ကျင်္ားနှင့်။မပြားမှန်းထ။ လူမိန်းမကို။ ရွီကြလီသော်။ နှစ်သိန်းကျော်၏။
ကြားသော်မြင်ခါ။ ကြောက်ဖွယ်သာတည်းး” ဟုဖြစ်သည်၊၁၈၂၆-ခုနှစ် ဗြိတိသျှလက်အောက် ကျရောက်ရသော
အခါ မြန်မာလက်အောက် နှစ်(၄၀) ငရဲစခန်းသည် တခန်းရပ်ခသည်၊ကျူးကျော်သူ မြန်မာရို့ကို နှင်ထုတ်ကာ အင်္ဂလိပ်ရို့ တဖန်အုပ်ချုပ်သည်၊ သို့သော် အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်ချိန်တွင် ရခိုင်ပြည်မှာ လူမကျန်ခ၊ ရခိုင်နိုင်ငံတခုလုံးသည် သုသာန်တစပြင်ပမာ တောကြီးမျက်မဲဖြစ်နီလီတော့သည်၊
ကျွှန်ဘဝတဖြစ်လှဲကို ရခိုင်ရို့က “ခေတ်ကောင်းခါကယင်”ဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသည်၊ မှန်ပါသည်၊ မြန်မာလက်
အောက် နှစ်(၄၀)လုံးလုံး ဒုက်ခရောက်နီသော ရခိုင်သားရို့သည် ရီနစ်သား တုံးဆွဲမိသကဲ့သို့ အသက်သျှုဖြောင့်ခရသည်၊ ကိုယ့်အိုးကိုယ့်အိမ်ပြန်နီခွင့်ရခသည်၊ တနည်းဆိုရလျင် ဗြိတိသျှရို့၏ အကာအကွယ်ကို ရခိုင်ရို့ရသည်၊ ရခိုင့်စာပီ ပြန်လည် နလန်ထူလာနိုင်သည်၊ လွတ်လပ်စွာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခွင့် ဟိသဖြင့် အတော်အသင့် ချမ်းသာလာကြသည်၊ ခေတ်ပညာကိုလည်း သင်ကြားခွင့်ရလာသည်၊ ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးတိကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခသည်၊ အင်္ဂလိပ်ခေတ်တွင် ရာထူးကြီးတိကို ရခိုင်သားတိထမ်းဆောင်နိုင်ခသည်ဟု အိုင်စီအက်စ် ဦးကျော်မင်းက မှတ်တမ်းရွီးဖူးခသည်။
ရခိုင်ကျွှန်သက် (၁၀၁)နှစ် တင်းတင်းပြည်သောနိန့် ၁၈၈၆-ခု။ ဇန်နဝါရီလ ၁-ရက်နိန့်မှာ ဗမာတပြည်လုံး အင်္ဂလိပ်လက်အတွင်းသို့ကျရောက်ရသည်၊ ၀ဋ်ကြွီးပြန်လည်သည်၊ ရခိုင့်အမျိုးသား ဆရာတော်အသျှင်ဥတမသည် မြန်မာပြည်၏ လွတ်လပ်ရေးမျိုးစိကို ဦးစွာပထမ အစချသည်၊ ဝံသာနုစိတ်ဓါတ်ကို နိုးဆွပီးသည်၊ အကြိမ်ကြိမ် ထောင်ကျအ ဖမ်းခံခရသည်၊ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ရန် ရခိုင်ဂေါင်းဆောင်တိသည် မြန်မာရို့နန့်တန်းတူကြိုးပမ်းခသည်၊ အချောင်မခို ဂျောင်မခိုခပါ၊မင်းသားကြီးရွီဘန်းသည် အင်္ဂလိပ်ကို စတင်တော်လှန်ဖို့ကြိုးပန်းသည်ကို မြန်မာမှတ်တမ်းမှာမဟိ၊
ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကို ရခိုင်က အယင်တော်လှန်သည်၊ ၁၉၄၅-ခု။ မတ်လ ၂၇-ရက်နိန့် မြန်မာက ဂျပန်ကို တော်လှန်သောအခါ ရခိုင်ပြည်တွင် ဂျပန်မဟိပါယာ၊ ရခိုင်ရို့သည် ကိုယ်အားကိုယ်ကိုး တော်လှန်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ဗမာတပ်မတော်မှ ရိုင်ဖယ်တလက် အကူအညီမယူပါ၊ ဂျပန်အဆုတ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ရခိုင်ပြည်သို့ ရောက်လာသည်၊ ဆရာတော်အသျှင်ဦးစိန်ဒါ ကျင်းပသော ကြာအင်းတောင် ညီလာခံကို တက်ဖြစ်သည်၊ အလံနီပါတီမှ ဦးအောင်သန်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို လူသတ်မှုဖြင့် တရားစွဲသည်(အသေးစိတ်ကိုဘုံပေါက်သာကျော်၏ တော်လှန်ရေးခရီးဝယ် စာအုပ်တွင်ဖတ်ပါ၊) စစ်တွေကြက်ကိုင်းတန်တွင်“ရခိုင်တကျပ်၊ ဗမာတကျပ်၊ သျှမ်းတကျပ်” တရားကိုဟောသည၊် စည်းရုံးလို့မရသဖြင့် “မြွီပွီးနန့်် ရခိုင်ကိုတွိကေ ရခိုင်ကိုအယင်သတ်ရမည်”ဟုမြန်မာပြည်တွင် ဝါဒဖြန့်သည၊်
သခင်စိုး၊ သခင်သန်းထွန်း၊ ကွန်မြူနစ်အဖွဲ့တိကလည်း ဆရာတော် အသျှင်ပညာသီဟကို ဗမာပြည် လွတ်လပ်ရီးရကေ ရခိုင်ကိုလည်း လွတ်လပ်ရီးပီးဖို့ မန်းတလေး မဟာမုနိကိုလည်း ပြန်ပီးဖို့လို့လိမ်သည်၊ ရိုးသားသော ရခိုင်ခေါင်းဆောင်ရို့က မြန်မာမျက်လှည့်ကို ယုံကြည်သည်၊လွတ်လပ်ရီးရလာသည်၊ သို့သော် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရီးဖြစ်သည်၊ ရခိုင်နန့်မဆိုင်ပါ၊ သျှမ်းနန့်မဆိုင်ပါ၊ မွန်နန့်မဆိုင်ပါ၊ ကရင်နန့်မဆိုင်ပါ၊ တိုင်းရင်းသားတိကို ကလိမ်ကကျစ်လုပ်ပနာရခသော လွတ်လပ်ရီးဖြစ်သည်၊ ဗိုလ်ချုပ်အာင်ဆန်းပြောသော ရခိုင်တကျပ်။ မွန်တကျပ်။သျှမ်းတကျပ်။ ဗမာတကျပ်မူသည် တိုင်းရင်းသားတကျပ် ဗမာအားလုံးဖြစ်လာသည်၊
တိုင်းရင်းသားတိ တကျပ်။ တကျပ်စီ ရသောအခါ မြန်မာ (၇)ကျပ် အိပ်ဝင်သပိတ်ဝင် ပင့်သကူ အချောင်ရသည်၊ (ယခု DVB အသံလွင့်ဌါနတွင် မြန်မာအသံက တရက်ကို (၄၅)မိနစ် ရသောအခါ တိုင်းရင်းသားတမျိုးစီက တပတ်လုံးမှ (၁၅)မိနစ်ရသည့် ဥပမာနန့် အလားတူသည်။တနည်းပြောရလျှင် ရခိုင်ရို့သည် မြန်မာတိအောက် နောက်တကြိမ် ကျွှန်ဇာတ်အသွင်း ခံလိုက်ရသည်၊မြန်မာရို့သည် သမိုင်းစိုဉ်တလျှောက် ရခိုင်လူမျိုးအပေါ်မည်သည့်အခါမှ ကောင်းကျိုးမပီးခပါ၊
ဗိုလ်ရန်အောင်ခေါင်းဆောင်သော ဗမာ့တပ်မတော်သည် မောင်ဝိုင်းတပ်အပြီး နှစ်ပေါင်း (၁၁၆)နှစ် အကြာတွင် ရခိုင်ပြည်တွင် ပထမဆုံး ခြီချလာသည်၊ ၁၉၄၂-ခုနှစ်တွင် ကုလားရန်ကိုကြောက်လို့ ထွက်ပြီးလာသော ရခိုင်(၄၀ဝ)ကျော်ကို ဗိုလ်ရန်အောင်သည် အကူအညီမပီးဘဲ သင်္ဘောကိုမြုတ်ပနာ လုပ်ကြံလိုက်သည်၊
မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရီးရပြီး လွတ်လပ်သော မြန်မာပြည်တွင် ပါလီမာန် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို
ကျင့်သုံးသည်ဟုဆိုသည်၊ ပါလီမာန်တွင် ရခိုင်သားရို့ လွပ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်။ တင်ပြခွင့်ကားရသည်၊ သို့သော် လွတ်လပ်စွာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကား မရ။ ၁၉၅၂-ခုနှစ်တွင် တောပန်ဇင်း၊ အခစား (ကျောက်တော်)။ မကျဉ်းကုန်း (မာန်အောင်နယ်)စသော ရွာတိကို ရွာလုံးကျွတ် သတ်ဖြတ်ပြီး ဦးနုက ရခိုင်သားရို့ကို ဒီမိုကရေစီနန့် မိတ်ဆက်ပီးသည်၊ ဦးနု၏ ဒီမိုကရေစီသည် ရခိုင်သားရို့အဖို့ ခါးသီးလှသည်၊
မြောက်ဦးမြို့ နန်းရာကုန်းထက်မှာ ရခိုင်မျိုးချစ် ထွန်းလှအောင်ကို မြန်မာစစ်တပ်က ကျားထိုးသတ်ပစ်သည်၊ ရခိုင်နိုင်ငံတော်သည် ဂျပန်ထက် အဆပေါင်းများစွာဆိုးသော မြန်မာလက်အောက်သို့တဖန် ကျရောက်ရသည်၊ ၁၉၅၈-ခုနှစ်တွင် ဖဆပလ နှစ်ခြမ်းကွဲသည်၊ ပြည်နယ်ပြသနာပေါ်လာသည်၊ ဦးနုခေါင်းဆောင်သော တည်မြဲ ဖဆပလက သူ့ပါတီကို မဲပီးကေ ရခိုင်ပြည်နယ် ပီးမည်ဟု လိမ်သည်၊ သန့်သျှင်းဖဆပလ ဘဆွေက“ပြည်နယ် မပေးနိုင်ဘူးး ခင်ဗျားတို့ကို ကျန်တ်တဲ့ဟာကိုဘဲ ပေးနိုင်မယ်” ဟု ပြောင်တိုက်စိန်ခေါ်သည်၊
ရခိုင်သားရို့သည် ပြည်နယ်အဆင့်ကိုပင် မြန်မာရို့ပါးက လက်ဖြန့်တောင်းခံရသော သူတောင်းစားဘဝ ကျရောက်ခရသည်၊ပြည်နယ်လိုချင်သော ရခိုင်သားရို့ သည် မျက်စိမှိတ်ပနာ၊ ရတည မဲအပါအဝင် အမတ်နီရာ (၉)ခုစလုံးကို ဦးနုအား ပုံအောလိုက်သည်၊၁၉၆၀-ပြည့် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ရွီးကောက်ပွဲတွင် ဦးနုပါတီအနိုင်ရသည်၊ သို့သော် ရခိုင်သားရို့ ပြည်နယ်မရ၊ ဒုတိယံပိ အလိမ်ခံရသည်၊ ရခိုင်သားရို့မှာ အရှက်လည်းရ ဝမ်းလည်းကြီးရသည်၊ “ဦီးးနုကတိ တည်ပါစီ။ ရခိုင်ပြည်နယ်အယင်ပီး” ဟုသာ ငယ်သံပါအောင်အော်စွာ လိုင်ခြောင်းကွဲသည်၊ ဝင်သီးနာသည်၊
ရခိုင်က ပြည်နယ်တောင်း။ သျှမ်းက ဖယ်ဒရယ်မူတင်လာသောအခါ ဦးနုသည် ဟန်မဆောင်နိုင်ဖြစ်ကာ နေဝင်းကို အာဏာလွဲအပ်လိုက်ရသည်၊ မြန်မာရို့ ပင်ကို ဘီလူးရုပ်ကို ပြရတော့သည်၊ အောင်ဆန်း “တကျပ်ကို နေဝင်းက လုယူလားသည၊် ထိုခါ မြန်မာက (၁၄)ကျပ်ရပနာ တိုင်းရင်းသားရို့မှာ ဝလုံးကွင်းသည်၊
၁၉၆၇-ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၃-ရက် ဥပုလ်နိန့် စစ်တွေမြို့တွင် ရခိုင်သား (၃၀ဝ)ရာကျောက်ကို နေဝင်း စစ်တပ်က ပစ်သတ်လိုက်သည်။ “ဘားဗူဟိယင့် ဆန်ဟိယင့််၊ ဒိုးးကျီဟိယင့် ရီဟိယင့့််” ဘဝင်မြင့်သော ရခိုင်သား၊ နေဝင်းလက်အောက် ထမင်းငတ်လို့ သူတောင်းစားဖြစ်ရသည်၊
မြဆန်စက်ရှိမှာ ရခိုင်သားတိ ခွီးသီ ဝက်သီ သီကတ်ရသည်၊ “မသီပီပါသိမ့် အသက်ဟိသိမ့်ရေ” ဆိုကေလည်း မလွတ် အရှင်လတ်လတ်မြီမြုတ်ခံရသည်၊ မဆလ လက်အောက် ရခိုင်တမျိုးသားလုံး စာရိတ်တပျက်စီးပြီးကေ ရခိုင် လူညွန့်တုံးသည်၊
ညီအစ်ကိုပါဟု မြန်မာရို့  လိမ်လို့မရ၊ ရခိုင်နန့် မြန်မာသည် တသီးတခြားစီဖြစ်သည်၊ ရခိုင်လူမျိုးသည် သမိုင်းစိုဉ်ဆက် ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်း ရာဇဝင်နန့်လာသော လူမျိုးတမျိုးဖြစ်သည်၊ မြန်မာရို့သည် မွန်ကတဆင့် ဗုဒ်ဓဘာသာဖြစ်သည်၊ မြန်မာရို့  အရေးကြီးရဟန်း ကိုးကွယ်ချိန် ရခိုင်ပြည်မှာ နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော် ဗုဒ်ဓဘာသာ အမြစ်တွယ်ပြီးဖြစ်သည်၊
ဧရာဝတီမြစ်သည် ကပ်ပလီပင်လယ်ထဲသို့ စီးဝင်သည်၊ ကုလားတန်မြစ်သည် ဘင်္ဂလားပင်လယ်ထဲသို့ စီးဆင်းသည်၊ ရခိုင်နန့် မြန်မာသည် မြီလည်းမတူ၊ ရီလည်းမတူ။ လူလည်းခြားသည်၊ ၈၈-အရေးအခင်းဖြစ်လို့ ဗမာတပြည်လုံး ကျကျက်ရိုက်သောအခါမှာ ရခိုင်ပြည်ကိုလည်း ကူးစက်လာသည်၊ ပြီးယှောင်ခရသော ရခိုင်သားများမှာ ဘောက်သာလိုက်၊ ထောင်ကျသားလည်းမကန်၊ သတ်ခံရသူလည်းမနည်း၊ ၁၉၉၀-ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရခိုင်ပါတီ ALDက အမတ်(၁၁)နိန်ရာရသည်၊ အဖိုးဦးသာထွန်း ထောင်ထဲမှာ အသတ်ခံရသည်၊ များမကြာ။ ရခိုင်ပါတီ အဖြိုခံရသည်၊ ရခိုင်ဂေါင်းဆောင်တိကိုဖမ်းဆီး ထောင်ချသည်။ NLD ပါတီက မဲဆွယ်တရား ဟောနိုင်ချိန်တွင် ရခိုင်သားရို့မှာ ယောင်လို့ပင် ဟလို့မရ၊ ပြောမိဆိုမိကေပင် မျက်ကန်းမျိုးချစ်။ အမြင်ကျဉ်းသူတိအဖြစ် တံဆိပ် အရိုက်ခံရသည်၊ ကျဉ်းမြောင်းသော မြန်မာလူမျိုးငယ် ဝါဒအောက်မှာ ရခိုင်သားရို့ဘဝ စုန်းစုနိပ် မြုတ်ရပါတော့သည်၊
၁၉၇၄-ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံကို နေဝင်း (၉၉)ရာနှုန်း ထောက်ခံမဲရသည်ဟုလိမ်ပနာ အတည်ပြုခသည်၊ အခုလည်း လိမ်လည်ပနာ အတည်ပြုထားသည်၊ အောင်ဆန်း က”မြွီပွီးနန့် ရခိုင်ကိုတွိကေ ရခိုင်ကိုအယင်သတ်ရမည်ဟု”ပြောဖူးသည်။ ရခိုင်စည်းရုံးရေးခရီး အပြီးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ”ကျမတော့ ရခိုင်တွေကို ချစ်မိသွားပြီ” ဟုဆိုသည်။ အသူ့ကို ယုံရဖို့လဲ။
၂၀ဝ၉-ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာလ (၃၁)ရက်နိန့်တွင် ရခိုင်ကျွှန်သက်အနှစ်(၂၂၅) နှစ် တင်းတင်းပြည့်သည်၊ ရခိုင်ပညာတတ်တိ စိုဉ်းစားပါ၊ ပညာမတတ်သူတိလည်း စိုဉ်းစားပါ၊ ရခိုင်အရိုး တောင်ပုံယာပုံဖြစ်လားဗျာယ်၊ယခုတဖန် ရခိုင်ကံကြမာသည် အကျွှန်ရို့၏ ဂေါင်းထက်
သို့ ကျရောက်လာဗျာယ်ဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပညာတတ်တိ။ ပညာဟိတိ။ ပညာမဲ့တိ အားလုံး သတိထားကတ်ပါ၊ မြန်မာရို့ဖေါ်စပ်တေ ဝမ်းနှုတ်ဆီး အမျိုးမျိုးကို သောက်ဖူးခပါဗျာယ်၊ ရခိုင်ရို့ တခုတည်းသော အန်တိမပန်းတိုင်သည်ကား ပဇာဖြစ်ပါသနည်း၊ ရခိုင်အချုပ်အခြာအာဏာ ရခိုင်လက်တွင်းရောက်ဟိရေးဖြစ်သည်၊
သမိုင်းကြောင်းကိုပြောကေ ပဒေသရာဇ်အချင်းချင်း စစ်ခင်းခကတ်သည်ဟုသာ စကားလှဆိုသည်၊ သို့သော် မြန်မာရို့သည် ပဒေသရာဇ်များ သိမ်းယူခသော နယ်မြီတိကို အပိုင်ရလိုသည်၊ ကဘာမကျီမသာမြီဟု ကြွေးကြော်ပနာ ဘုရင့်နောင်။ ကျန်စစ်သား။ အလောင်းဘုရား စသည်ဖြင့် အခြောက်တိုက် ရန်စောင်းနီတတ်သည်၊ ပညာပီးရဖို့ အချိန်ကိုရောက်လာပါဗျာယ်၊ ကနိန့် အချိန် ရခိုင်သားရို့သည် မည်သို့မျှ မတုံ့ပြန်သိမ့်ကေလည်း မုန်တိုင်းသည် ကြိမ်းဝါးဖို့အတွက် အားယူတာစူလျှက်ဟိသည်။
(ရွီးရေလူနာမည်သိကေ တစ်ခေါက်ချေ ဆီဘောက်စ် မှာပြောခပါ)
Posted by မင်းဆက်ရခိုင် at 16:31 ,0comments
ဂျောင်ထိုးနီ ရရေ .........။
အောက်ကျ နောက်ကျ နန်.
မင်းရိုတိ ညီညွတ်ရေး ...........။
မင်း မယားတိ ဘက်မှာလာ
မင်း အမျိုးတိ ဘက်မှာလာ
Posted by မင်းဆက်ရခိုင် at 11:27 ,0comments
The Arakan (ရခိုင့်ဌာနီ)
ARAKAN, Our Fatherland
The Arakanese Gene( ဗီဇ)
အမြင် အလှူခံ ဌာန
Arakan song ရခိုင်တေးခြင်း
သိရေ နန်း ..........။
The Kingdom of Arakan or The dark side of the VOC ...